Burmese Buddhist Association in Amarillo reformed | MoeMaKa Burmese News
Help Support MoeMaKa
Monthly Pledge to MoeMaKa
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ HOME, ၅၈/၆၀ ဗိုလ်အောင်ကျော်အောက်လမ်း၊ ရန်ကုန်၊ ဖုံး (၀၉၂၅- ၄၂၀၀ - ၆၀၆)။ စာတိုက်သေတ္တာ (၈၂၅)၊ ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီး။
MoeMaKa Last Version
Free Burma Records
MoeMaKa Dot Com Page
MoeMaKa Travel Guide
MoeMaKa Phone Card
» Local News Headlines
» Burmese Buddhist Association in Amarillo reformed
Burmese Buddhist Association in Amarillo reformed
တက္ကဆက်၊ အမာရီလိုမြို့ မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမိုးမခအထောက်တော် (အမာရီလို)၊ အောက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၁၂အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တောင်ဖက်ခြမ်း တက္ကဆက်ပြည်နယ် အမာရီလိုမြို့ ရှိ မြန်မာထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်း၏ နှစ်ပတ်လည် ဖွဲ့ စည်းပုံ စည်းမျဉ်းပြင်ဆင်အတည်ပြုရေးနှင့်ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ အခမ်းအနားတရပ်ကို အမာရီလိုမြို့ ဇေယျသုခ ဓမ္မရိပ်သာ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ ဇေယျသုခ ဓမ္မရိပ်သာ ခန်းမတွင် နေ့ လည် ၁ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီထိ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။အဆိုပါ အသင်းကို အမာရီလိုမြို့ မှ မြန်မာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့ က ပိုမိုစည်းလုံ ညီညွတ်စွာ ဘာသာ သာသနာအရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ ငှာ ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အသင်း၏ စည်းမျဉ်းပြင်ဆင်အတည်ပြုရေးနှင့်ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်၍ “အသင်းရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်တွေကို တနှစ်တခါ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ စားဝတ်နေရေးနှင့် ပညာရေးကိစ္စတွေကြောင့် အသင်းကြီးမှာ ဆက်လက်ပြီး တာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နေရာမှာ အရွေးကောက်ခံ တာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်နိုင်ကြမယ့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကာ အားအင်သစ်တွေနဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ကြတာပါ” ဟု အသင်း၏ ဥက္ကဌ ဦးညီညီက မိုးမခသို့ ပြောသည်။“အတ္တဟိတနှင့် ပရဟိတကို ချင့်ချိန်ပြီးတော့ ဘာသာ သာသနာအကျိုး၊အများအကျိုးကို နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့ လူငယ်တွေက ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ရွေှးရှယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု အသင်း၏ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ကိုချစ်ဆွေက မိုးမခသို့ ဆက်လက်ပြောကြားသည်။အမာရီလိုမြို့ ရှိ ဇေယျသုခ ဓမ္မရိပ်သာ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့ဒေသ အသီးသီးမှ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ၊အသက်၊သိက္ခာနှင့်ဂုဏ်ရှိန်ကြီးမားသည့် နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကတိက တရားဟော တရားပြ အကျော်အမော် ဆရာတော်ကြီးများ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနီးပါး ကြွရောက်ကာ တရားဟော တရားပြနေသည့် မြန်မာထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ တွင်လည်း နိုင်ငံအကျော်အမော် ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သည့် ရွေည၀ါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟ ကြွရောက်လာမည်ဖြစ်ပြီး သစ္စာဓမ္မ တရားပွဲသဘင်ကျင်းပ၍ တရားဟော တရားပြမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ အမာရီလိုမြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံဖွား တိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြသည့် ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း မွန်၊ဗမာ၊ရခိုင် ရှမ်း ပအိုဝ့် ပလောင် အစရှိသည့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့ ချစ်ခင်ရင်နှီးစွာ အတူတကွ မှီတင်းနေထိုင်ကြသည့် မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်ကြောင်းလည်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
Categories: Local News Headlines
Advertise with MoeMaKa Monthly Magazine & Online
Media is not free in Burma
MoeMaKa Monthly May 2015 ထွက်ပြန်ဘီ တဲ့..
ပျံလေတဲ့ငှက်ခါး နားမှသိမယ် ဒေါက်တာဓမ္မပိယ (ITBMU)၊ ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၃ ဧပြီ (၆)ရက်နေ့က ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်တယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ အေးတဲ...
ဆောင်းလူ - အပြာကား သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၁၄ လူတွေက ပြောကြမယ် ဒါသိပ်ညစ်ပတ်တယ်လို့ ဘာထူးလဲ ...သူတို့လည်း ..။ ကလေးကအစ ခွေးက အစ ဒီနိုင်ငံမှာ .....
အို ဆရာမရယ် ထူးထူး (တောင်ငူ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၄ အခန်း -၁- မြန်မာပြည်မြေပြန့်၊ ပျဉ်းမနားမြို့ အနီး- “အလျှင်လို” ရွာသား သာလှ တစ်ယောက်၊ ရ...
အိုဘယ့် မြို့တော် (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၅ နွေအကုန် မိုးအကူးရောက်ပြီ ....။ နွေဆိုလည်း နွေမို့ ....။ မိုးဆိုလည်း မိုးမို့ဆိုသလို ဒီတ...
မောင်တူး - သက်ရှိပန်းချီ - အပိုင်း (၁၇)
မောင်တူး - သက်ရှိပန်းချီ - အပိုင်း (၁၇) (မိုးမခ) မေ၂၆၊ ၂၀၁၅ • ခွပ်ဒေါင်း ရဲဘော် ကျောင်းသားအိုကြီးတယောက်အကြောင်း ဒီမိုကရေစီ ပည...
အုန်းနိုင် - ဂန္ဒီခန်းမ ကြေညာစာတမ်း (၈)
အုန်းနိုင် - ဂန္ဒီခန်းမ ကြေညာစာတမ်း (၈) သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၁၄ • နဝတ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၉၀) ဒီကြေညာချက်မှာ စာပိုဒ်ပေါင်း (၂၁) ပိုဒ်ပါ...
ကာတွန်း ATH - ဟောက်သံထွက်ပေါ် တို့လွှတ်တော်
ကာတွန်း ATH - ဟောက်သံထွက်ပေါ် တို့လွှတ်တော် မေ ၂၈၊ ၂၀၁၅ ကာတွန်း ATH ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - မီးလင်းကုန်ပြီ
ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - မီးလင်းကုန်ပြီ မေ ၂၅၊ ၂၀၁၅ ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း - ဥပဒေအရ
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း - ဥပဒေအရ (မိုးမခ) မေ ၂၄၊ ၂၀၁၅ ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း - လိုချင်သေးလို့
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း - လိုချင်သေးလို့ (မိုးမခ) မေ ၂၈၊ ၂၀၁၅ MoeMaKa News (editors @ moemaka.net ) – PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA . Powered by Blogger.
MoeMaKa Kindel Store
မိုးမခမဂ္ဂဇင်းအား အောက်ပါ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၁။ စာပေလောက (၂၊၅၊၆) (ပန်းဆိုးတန်း၊ လှည်းတန်း၊ ရန်ကင်း) ၂။အမေ့အိမ် (ပန်းဆိုးတန်း) ၃၊အာရုဏ်သစ်စာပေ (ဗိုလ်ချုပ်လမ်း) ၄။ အင်းဝစာအုပ်တိုက် (လှည်းတန်း၊ပန်းဆိုးတန်း) ၅။ဝါမိုးအောင်စာပေ (ကုန်သည်လမ်း) ၆။သာလွန်စာအုပ်တိုက် (ကုန်သည်လမ်း) ၇။တူဒေးစာအုပ်တိုက် (ကုန်သည်လမ်း) ၈။ရာပြည့်စာအုပ်တိုက် (ပန်းဆိုးတန်း) ၉။ရန်အောင်စာပေ (ရန်ကင်းလမ်းမကြီး၊၁၂လုံးတန်း) ၁၀။ဖိုးတုတ်စာပေ (၃၁ လမ်း) ၁၁။ မီဒီယာကော်နာ (အနော်ရထာလမ်း မီးပွိုင့်ထောင့်) ၁၂။နန်းဦးစာပေ (မဟာဗန္ဓုလလမ်း) တို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ တဆင့်ပြန်လည် ရောင်းချလိုသူများအနေဖြင့် နန်းဦးစာပေ (၀၁- ၃၇၈၄၀၈၊ ၀၁-၂၅၁၁၈၇ )သို့လည်းကောင်း ၊ရန်အောင်စာပေ (ရန်ကင်း)သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်၍ ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Copyright © 2012 MoeMaKa Burmese News. All rights reserved.